Wax Badan Ka Barro Afar Talaabo oo kuu Sahlaya Inaad Ganacsi Wanaagsan Abuurtu.. - Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Wax Badan Ka Barro Afar Talaabo oo kuu Sahlaya Inaad Ganacsi Wanaagsan Abuurtu..
Published: January 11, 2017, 11:28 pm
Muddo ayaad ku riyoonaysay in aad abuurato ganacsi, oo hada waxaa la joogaa xiligaa aad shaqada bilaabi lahayd.
Hadaba sidee ku heli kartaa fikrad ganacsi oo faa’iido dhalin karta? halkaan waxaan idin-kugu soo bandhigaynaa 4 ka mid ah xeeladaha ugu caansan ee aad raaci karto si aad u hesho fikrad wax-ku-ool ah.
Xooga saar waxyaabaha aad ku wanaagsantahay– Marka aad ka fikirayso fikrada ganacsiga, waxaad xooga saartaa oo baadhitaan ku samaysaa waxyaabaha aad adigu qaban karto. Maxaad aqoon ama waayo-aragnimo u leedahay? Maxaad ku wanaagsantahay? Ma jiraan waxyaabo aad khabiir ku tahay? Jawaabaha su’aalahaas ayaa noqon kara fikrad ganacsi oo wanaagsan. Tusaale, haddii aad ku wanaagsantahay cunto-karinta oo qofkasta oo cuntadaada dhadhimayaa uu la dhacayo, waxaad abuuri kartaa maqaaxi. Haddii aad tahay qofka loo yeedho marka uu baabuur xumaado waxaad furan kartaa geerash. Waxaan filayaa in aad fahantahay muhiimada qodobkaan.
Waxaa muhiim ah in markii aad liis-garayso waxyaabaha aad ku wanaagsantahay aad qiimeyn guud ku samayso midkasta, oo aad jawaab u hesho su’aalaha sida dhaqaalaha ku baxaya aasaaska ganacsigaas, inta qof aad u baahantahay in aad fuliso mise waa shaqo aad adiga keligaa bilaabi karto? Waa maxay shuruudaha sharciyeed ee qabanaya ganacsiga nuucaan ah?
Maskaxda ka shaqaysii (Brainstorm)– Nidaamka loo yaqaan Brainstorming waa xeelad ay isticmaalaan koox walba oo doonaysa in ay helaan fikrado cusub. Waxaa la sameeyaa in la ururiyo oo la liis gareeyo fikrado badan oo kala duwan ka dibna qiimeyn lagu sameeyo kuwa ugu wax-tarka-badan. Waxa aad samayn kartaa in qoyskaaga ama asxaabtaada ama cida aad doonayso in ay ganacsi kula abuurto aad wada fadhiisataan oo aad isticmaashaan xeeladaan.
Sameey cilmi-baadhis suuq (Market research)– Marka aad isbardhigto fikradaha kala duwan ee aad heshay, talaabada ku xigta waa in aad sameyso baadhitaanka-suuqa (market research) taasoo aad ugu kuur-galayso macaamiishaada, shirkadaha kula tartamaya, qiimaha iyo dhammaan waxyaabaha kala duwan ee saameyn kara ganacsigaaga. Waxaa aad u muhiim ah in baadhitaankaaga aad ku ogaado inta uu le’egyahay suuqa alaabtaada iyo baahida loo qabo. In aad abuurto ganacsi aan loo baahnayn ama aad soo dejiso alaab aysan cidna xiisaynayn waa khasaare weyn.
Wada tashi samee– Talaabada xigta waa in aad heshaa dad kula taliya oo qaasatan khabiir ku ah arinta aad doonayso in aad ganacsiga ka dhigto ama aad hesho dad ganacsato ah oo aan adiga kula tartamayn oo ku siin kara talooyin ku aadan fikradaada cusub iyo sida loo socod-siin karo. Waxaa muhiim ah in fikrada aad u bandhigayso la-taliyayaasha in ay tahay mid si fudud loo fahmi karo isla markaana aad diyaar u noqoto in ay dadkaas ka dhiibtaan aragtiyo kala duwan oo qaarkood aadan jeclaysan doonin.
Qiso Inoogu Filan Cibro Qaadasho Is Weeydii Ma Qarin Kartaa Ceebaha Dadka ?
Sheeko:- Carar ayaan is iri, waanse raftay. inan cabaado ayaan isku dayey, waanse xamxamleeyay.